बिहे गरेको ३५ वर्षपछि किन हालिन् हेमाले छवि-शिल्पाविरुद्ध मुद्दा ? रेखाको भूमिका कति ? - Nepal Insider
Home/समाज/बिहे गरेको ३५ वर्षपछि किन हालिन् हेमाले छवि-शिल्पाविरुद्ध मुद्दा ? रेखाको भूमिका कति ?
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्ना फिल्म निर्माता श्रीमान् छवि ओझाबाट भोगेको घरेलु हिंसाको वृत्तान्त बाहिर ल्याएपछि केही दिनयता उनीहरूको सम्बन्ध सार्वजनिक चासोको विषय थियो।
यो खबर अनिल यादवले नेपाललाइभमा लेखेका छन् । छविसँग झगडा परेपछि करिब १ महिनायता दाजु-भाउजूको घरमा बस्दै आइरहेकी शिल्पा छविविरुद्ध डिभोर्स प्रक्रियामा गइसकेकी छन्। असार–८ गते फिल्म हेर्न जाने निहुँमा उनीहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि छविले शिल्पालाई कानको जालीमा प्वाल पर्ने गरी कुटपिट गरेको शिल्पाको दाबी थियो। बिहे गरेको एक महिनादेखि नै आफूले हिंसा वेहोर्दै आएको र हिंसाको हद पार भएपछि आफू डिभोर्सको निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।